Firefox Premium, iyo yakabhadharwa vhezheni yebrowser ichauya gore rino | Linux Vakapindwa muropa
Firefox Premium, iyo yakabhadharwa vhezheni yebrowser ichauya gore rino
Mozilla sezviri pachena inoronga kuvhura Premium vhezheni yeFirefox browser gare gare gore rino.
Izvi zvakasimbiswa nemukuru wesangano iri, Chris Beard, panguva yehurukuro neiyo yeGerman svikiro T3N, zvichijekesa kuti iyo yemahara vhezheni ichaenderera iri yemahara.
Sekureva kwaNdebvu, kuvanzika uye chengetedzo zvichave zvakakosha zvechipo mune ino yakabhadharwa browser.
Mwedzi mishoma yapfuura, Mozilla yakazivisa mubatanidzwa nekambani ine hunyanzvi muVPN, saka hazvina musoro kufunga kuti sevhisi inosangana yakananga mubrowser, Ine chirongwa chakabatanidzwa mumutengo webrowser
Parizvino hapana ruzivo pamusoro pemutengo webrowser kana kana ichizonyoresa pamwedzi senge mamwe masevhisi edigital. Ndebvu dzakakurudzira kuti pachave nePrimiyamu tiers, saka panenge paine yemahara tier ine yakakosha browser.
Kana paine yemahara vhezheni yeFirefox ine hafu-maficha, Mozilla inoisa njodzi yekuve "muyedzo vhezheni" iyo isiri wese munhu anoda kushandisa seyakanyanya browser, zvisinei izvi zvingave zvichidikanwa.
Mozilla inochengetedza bhurawuza rayo zvichibva mukudyidzana kwayakaita nemamwe makambani seGoogle, Yahoo kana Baidu. 90% yemihoro yako inobva kune ino sosi.
Zvichida kuita mari pachigadzirwa chako chakasarudzika ndiyo sarudzo yekusiyanisa mari yaunowana, asi isu tinofanirwa kumirira kuti tione kana bhurawuza iri richikosha kana kuti richiramba riine nzira isiriyo yekubhadhara.
Iko hakuna yakawanda data paFirefox Premium, kunyangwe ndebvu dzakataura izvozvo Ichasvika muna Gumiguru wegore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Firefox Premium, iyo yakabhadharwa vhezheni yebrowser ichauya gore rino
PinePhone inokutendera iwe kusarudza imwe yeanoverengeka anoshanda masisitimu